China Helmet Battery၊ Toy Battery၊ VR Battery - Hi-Chipcom
ငါတို့ထံမှ VR မျက်မှန်ဘက်ထရီဝယ်ဖို့ကြိုဆိုပါသည်။
သင့်ထံမှ VR device ဘက်ထရီကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။
iPhone သည် Android ဖုန်းထက် အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များစွာရှိသည်။ ၎င်း၏ကြာရှည်ခံမှုအတွက်လူသိများသည်, ဒါပေမယ့်ဘက်ထရီမပါဘူး. ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone 12 Pro တွင် ဘက်ထရီအသစ်သည် ဘက်ထရီအရည်အသွေးပြဿနာများနှင့် ရှေးဦးစွာအိုမင်းပြီးနောက် အသုံးပြုမှုပြဿနာများကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားသောကြောင့် "Batterygate" မရှိတော့ကြောင်း သေချာစေသည်။
iPhone 12 Mini ဘက်ထရီအသစ်
iPhone သည် Android ဖုန်းထက် အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များစွာရှိသည်။ ၎င်း၏ကြာရှည်ခံမှုအတွက်လူသိများသည်, ဒါပေမယ့်ဘက်ထရီမပါဘူး. ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone 12 Mini အသစ်တွင် ဘက်ထရီအသစ်သည် ဘက်ထရီအရည်အသွေးပြဿနာများနှင့် အသုံးပြုမှုပြဿနာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသောကြောင့် "Batterygate" မရှိတော့ကြောင်း သေချာစေသည်။
iPhone7ဘက်ထရီအသစ်
iPhone သည် Android ဖုန်းထက် အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များစွာရှိသည်။ ၎င်း၏ကြာရှည်ခံမှုအတွက်လူသိများသည်, ဒါပေမယ့်ဘက်ထရီမပါဘူး. ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone7၏ ဘက်ထရီအသစ်သည် အစကတည်းက အိုမင်းပြီးနောက်တွင် ဘက်ထရီအရည်အသွေးပြဿနာများနှင့် အသုံးပြုမှုပြဿနာများကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားသောကြောင့် "Batterygate" မရှိတော့ကြောင်း သေချာစေသည်။
iPhone 6s ဘက်ထရီအသစ်
iPhone သည် Android ဖုန်းထက် အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များစွာရှိသည်။ ၎င်း၏ကြာရှည်ခံမှုအတွက်လူသိများသည်, ဒါပေမယ့်ဘက်ထရီမပါဘူး. ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone 6s အသစ်၏ဘက်ထရီသည် အစပိုင်းတွင် အိုမင်းပြီးနောက်တွင် ဘက်ထရီအရည်အသွေးပြဿနာများနှင့် အသုံးပြုမှုပြဿနာများကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားသောကြောင့် "Batterygate" ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း သေချာစေသည်။